Slimbook Kymera, simba rakafanana neiyo yeLinus Torvalds PC | Linux Vakapindwa muropa
Slimbook inogara ichisarudza yakanakisa Hardware yezvikwata zvako, aine akanakisa emhando uye mashandiro akanaka pamusika. Linux inoita izvo zvainoshaya kuti iite iyi Hardware ishande nenzira inoshanda kwazvo uye uwane zvakanyanya mairi. Iyo seti inoita kuti makomputa eiyi Valencian yakasimba ishande semakanika eiyo Swiss wachi.
Ya isu takataura newe munguva yakapfuura nezve inonakidza yapfuura-maawa Slimbook KYMERA. Zvishandiso zvaunogona kusarudza kubva neyako yaunofarira distro pre-yakaiswa, uye ayo akatemerwa mutengo wakakura kune yakasarudzika Hardware yavanosanganisira. Iwe zvakare ucharangarira izvo, kwenguva yekutanga mumakore gumi nemashanu, Linus Torvalds akachinja PC yake kuita AMD-yakavakirwa iyo inobatanidza nayo kusvika katatu nguva nekukurumidza ...
Kunyanya, iyo kernel guru ine imwe yakavakirwa pa AMD Threadripper 3970X. Iyo chip inodhura zviuru zvemamiriyoni. Kune rimwe divi, pane imwe sarudzo yakachipa ine chiitiko chisiri kure neichi. Zviri nezve chip AMD Ryzen 9 3900X kufanana neiyo iwe yaunogona kushongedza pane yako Slimbook KYMERA Ventus. Naizvozvo, kune mashoma mashoma mauros unogona kuva nesimba rakanyanya kune desktop yako PC.
1 Misiyano: AMD Ryzen 9 3900x kubva kuSlimbook vs AMD Threadripper 3970X kubva kuLinus Torvalds
2 Ok ... hauna kugutsikana uye iwe unoda zvakafanana naTorvalds?
Misiyano: AMD Ryzen 9 3900x kubva kuSlimbook vs AMD Threadripper 3970X kubva kuLinus Torvalds
Machipisi ese ari maviri ndeayo yepamusoro-kumagumo AMD, kune izvo zvakagadzirirwa vanofarira kana HEDT (Yakakwira-kumagumo Desktop). Mukati maro mune macores akavakirwa pasimba reZen 2 microarchitecture, iri kupa mhedzisiro yakanaka uye ichiita kukuvara kwakawanda kumvura yemvura yeIntel's flagship.
Zviratidzo AMD Ryzen 9 3900X AMD Threadripper 3975X
ISA AMD64 + Kuwedzeredzwa AMD64 + Kuwedzeredzwa
Nuclei 12 32
Frequency 3.8 Ghz (yakavhurwa yekuwedzeredza) 3.7 Ghz (yakavhurwa yekuwedzeredza)
Turbo modhi 4.7 Ghz 4.5 Ghz
Cache (L1 / L2 / L3) 768KB + 6MB + 64MB 3MB + 16MB + 128MB
Ndangariro chiteshi Dual Channel (DDR4 3200Mhz) QuadChannel (DDR4 3200Mhz)
ECC kutsigira Si Si
Ancho de banda 47.68GB / s 95.37GB / s
Kugadzira node TSMC 7nm FinFET TSMC 7nm FinFET
TDP 105W 280W
Mutengo 469 € 2034 €
Mhedziso, iyo AMD Ryzen 9 yeSlimbook haina kungodhura chete uye ine yakaderera yekushandisa, zviri nani zvakare kune maficha akadai semavhidhiyo mitambo, iyo inoda yakakwira wachi uye isingatore mukana wekufananidza kwemamwe macores ...
Ok ... hauna kugutsikana uye iwe unoda zvakafanana naTorvalds?
Zvakanaka, Slimbook zvakare inokutendera iwe kuve nemazvo zvakafanana naLinus Torvalds pakombuta yake, ndiko kuti, kunyangwe kana asingaise pawebhusaiti yake, unogona kumubvunza kuburikidza nekambani yekambani yeSpain kuti akwire AMD Threadripper 3970X mune ramangwana rako Kymera Ventus. Zvakare, ivo vane imwe 3000-Series Threadripper. Iwe hauzove nekunyunyuta !!!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » KYMERA Slimbook - Inzwa Linus Torvalds PC-senge simba remutengo wakachipa kwazvo
Iko mashandiro eprosesa haana kuyerwa muGHz, kana IPC, MIPI, MAFUPA, TFLOPS ...
Muchokwadi, kana iwe ukatarisa mabhenji emitambo eiyo 3900X uye iyo Threadripper 3970X, ivo havaite zvakafanana uye mutsauko muzviitiko zvakawanda unowanzo kuve wakashata (zvinhu zvemifananidzo uye simba re RAM) (https://www.youtube.com/watch?v=aKKeZ8UhCEk).
Kana iwe uchida kuziva kuti chimwe chinhu chinoita sei, tarisa mabhenji anoratidzwa nekambani yenharaunda. Usavimba nevakagadziri (kunyangwe iyo SSD yekumhanyisa yakaiswa muma specs inosvika padyo nekushandisa chaiko kwenyika).
Pindura kuna n0ct1s_tar_gz
Hongu..yee nemaPC ese nemakomputa zvakagadzirwa uye zvinogadzirwa kungotamba mitambo.
Avo vanofunga seizvi vanogara mukati megore rakakura regasi… kutaura zvishoma.
Ventoy: gadzira bootable USB nekungodhonza iyo ISO kune iyo pendrive